Unogovana sei mafaera muLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Mubvunzo unonakidza, unobva pane zvakaitika kwandiri semushandisi weLinux.
La inoda kugovana mafaera iripo mukati medu tese, angave ari novice kana nyanzvi mushandisi. Ini handireve kana uchigovana nguva ino kuburikidza yakavhurika P2P network, asi kana iwe uchida kupasa gwaro, mumhanzi kana vhidhiyo inorema kwazvo kushamwari, zvakananga, PC kuPC, shamwari shamwari paInternet.
Ndiri kukupa mienzaniso yenzira dzekugovana magwaro.
El Email: Izvi hazvisi zveLinux chete, asi isu tese tinoshandisa iyi nzira yekugovana magwaro, dambudziko nderekuti haina kunyatsogadzikana uye haina kuzadzisa 100% iyo yakananga kubva kuPC yangu kuenda kuPC yeshamwari yangu, murevereri ari iyo e-mail ye server, iyo inowanzo kuve neyakaganhurirwa saizi uye kunyangwe mafaira ekuwedzera.
Isa iyo faira kuInternet: Tese tinonzwisisa mashandiro ainoita, kuendesa mhando iyi mafaera atinowanzo shandisa ma "direct download" masayiti, iyo yakajairika Rapidshare kana imwe saiti yakafanana, tinoisa iyo faira kuseva, tipe iyo link uye tinoiendesa kune shamwari yedu. Sezvo pro ine kuti iye kana mafaera anogona kuva nehuremu hwakawanda, maringe nekukanganisa kwenzvimbo idzi, pakupedzisira vane muganho unogona kuve 100mb pafaira, uyai, zvakanyanya kupfuura email asi isingakwanise kutumira chinhu chinorema nekukurumidza. Inotambisa nguva yakawanda.
Iniwo ndaisazoshandisa kana zvandiri kugovana zvakavanzika kana kukanganisa.
Dropbox / Ubuntu Rimwe: Ini ndaisa mhinduro mbiri idzi zvakafanana nekuti, zvakadzika pasi, zvakafanana. Aya ndiwo maviri linux mhinduro dzinoshanda mukati megore, ndiko kuti, paInternet zvakare sevamiririri. Ivo vanokupa iwe nzvimbo yeX huwandu hwegigabytes, yakaiswa paPC yako kana uchida uye inoenderana nezviri mukati mayo neyeye gore. Iyo inoshandiswa kugovana nekuti unogona kugovana maforodha nevamwe vashandisi kana kushandisa iyo "yeruzhinji" dhairekitori uye nekungopfuura iyo batanidzo yefaira.
Iko kusagadzikana kwesisitimu iyi, kunze kwekuda muyananisi (pamwe nekurasikirwa kunoenderana kwenguva) ndeyekuti inoda kubatana kwakachengeteka uye inoshandisa zviteshi zvinogona kuvharirwa paPC yemugashiri.
LAMP: Rimwe zuva rakanaka unofunga kuti chinhu chakanakisa kugadzira sevha paPC yako, senge anoshandiswa newebhu asi kugovera mimhanzi yako, zvinyorwa zvako kana mavhidhiyo ako neshamwari dzako (uchifunga kuti haudi kuenda nazvo murevereri). Pakupedzisira mhinduro yakananga. Iyo faira inoenda kubva kuPC yako kuenda kushamwari yako PC. Kana iwe usingazive chinonzi LAMP chii.
Kukanganisa: Iyo inorema uye inogona kusingaenzaniswi muhuremu uye kumisikidzwa kune avo vanozvida kuti zvinhu zviitwe. Uye zvakare, kuti ugamuchire mafaira zvinoda kuti ugadzire peji rinogamuchira mafaera (uye havazi vese vanozoziva maitiro ekuronga) kana kukwira FTP. Muchidimbu, pamhando iyi yekushandisa inogona kunge yakanyanyisa kukura.
Droopy + Rakareruka Server HTTP: Mhinduro isingazivikanwe asi iyo, pakupedzisira, zvirinani kwandiri yandakawana ndiyo inoshanda kwazvo. Pane zvishandiso zviviri, imwe yekugamuchira mafaera uye imwe yekugovana zvaunazvo. Droopy ndeye python script iyo inobvumidza iwe kuti ugamuchire mafaera kubva kune chero munhu ari paInternet akananga kune yakasarudzika dhairekitori paPC yako. Iwe unopa iyo IP yePC yako kushamwari yako semuenzaniso, ine chiteshi 8000 kumberi (kunyangwe ichigona kuve chero chaunogadzirisa) seichi> kwachinowana chaicho "kubhurawuza" kurodha mafaira.
Nyore Server HTTP Iyo faira server (iyo yandakasangana nayo nezuro) iyo inokutendera iwe kuti uite zvinopesana, pane kugashira, govana mafaera. Nezve izvo, neconsole isu tinoisa chaizvo mufaira ratiri kuzogovana (nemirairo «cd», ndizvo zvandiri kureva) uyezve toita unotevera kuraira:
Iko "8000" iri chiteshi, ivo vanogona kusarudza chero imwe. Ipapo, ivo vanopa iyo IP kushamwari uye iye achaona mafaera ari mune iro folda mubrowser yake.
Chinhu chakanaka pamusoro pemhinduro idzi ndechekuti kunyangwe iyo IP ichipihwa, chinova chinhu chisina kusimba, zvinofungidzirwa kuti tinozviitira vanhu vakavimbika uye tinogona kuvhara maseva (kuvhara koni kana kupedza maitiro) nekukurumidza pavanenge vasiri yakashandiswa kwenguva refu.
Zvino ndinofanira kukubvunza:
Ndeapi mhinduro iwe kana shamwari dzako dzaunoshandisa kugovera mafaera paLinux? Chinhu chatisina kuisa muchinyorwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Unogovana sei mafaera muLinux?
Imwe mhinduro yakasununguka uye inokurumidza ndeye kushandisa Opera Unite.
Pindura kune alavezz
Ini ndinorekodha zvese uye ndinoenda nemota yangu kumba kweshamwari yangu kuti ndiende nayo kwaari. : P
Zvino, kana shamwari yangu iri muCongo, saka ne filezilla uye woiisa kune iyo yekutambira, zviripachena, ini ndinogashira kwekuiisa.
Ndinoda kuratidza kune munyori kuti DropBox is a linux solution, kana iri zvakare Windowssera neMacquera, uye hazvitombo fanirwa kuisa mutengi, nekuti unogona kuita zvese zvakananga kubva paWebhu.
Mhinduro dzakaratidzwa ndedzechokwadi uye dzinoenderana nesvikiro mavanofanira kugoverwa: kure.
Ini ndinosuwa kushandiswa kweP2P, kana Microsoft Live SkyDrive uye nezvimwe, kana Linux koni mirairo pane zvakavanzika network
Bug Pro akadaro
Opera unite ndiyo mhinduro yakanakisa, hapana zvinonetsa
Pindura Bicho Pro
ne usb, pasina mubvunzo, kunyangwe iwe uchifanira kuiisa neruoko :)
@esty zvasara pauri hahaha
@dav asi iyo haisi mhinduro iri kure
@Bicho Pro ndakafunga nezvekuisa imwe nzira asi ini handina kufunga kuti inogona kuzara, iyo inzira yekugovana mupfungwa imwechete (iwe uchienda kune vamwe) asi zvinopesana haina kuenzana, nekuti imwe yacho inofanira kuita zvakafanana iwe uye kuiswa Opera, nezvimwe.
@Rafael Hernamperez: Ini ndanga ndati isu tichazotarisisa munzira dzatinogovana mafaera paInternet muchivande, iyo yakajairika uye yazvino P2P haipinde nekuti, kunze, iwo mafaira anoonekwa nemunhu wese kunze kweshamwari yako newe .
Ini ndinozviita nenzira dzinoverengeka uye zvinoenderana nenyaya yacho:
1.- Faira rimwe chete kubva kuLinux kuenda kuLinux, ini ndinoshandisa scp (yakachengeteka kopi kuburikidza nessh). Izvo zvakaoma uye zvinoda kumisikidzwa kwemushandisi anogona kuteedzera mafaera kubva kumushini unogovana iyo faira, asi yakachengeteka.
2.- Dhairekodhi kubva kumahwindo kuenda kuLinux: Samba, pasina kumwe kutaura.
3.- Dhairekodhi kubva kuLinux kuenda kuWindows: Zvakare neSamba. Mune gnome zviri nyore sekudzvanya kurudyi pane folda uye kusarudza sarudzo yekugovana.
4.- Imwe faira reLinux kune chero chinhu chine browser: BaShare. chirongwa chinokubvumidza iwe kuti ugovane faira pamusoro penetiweki, yakafanana chaizvo neiyo SimpleHTTPServer script (inogona kunge ichishandiswa) asi ine graphical interface.
Ini handina sarudzo dzeMaqueros nekuti ini handina Mac yekuyedza nayo.
Ini handigovane chero chinhu, zvese ndezvangu, ha ha
Kwete zvakakomba, kazhinji ne rapidshare uye kambani asi kana nechimwe chikonzero ini handidi kuti mafaera aya ave mune inet ne scp
Chinhu chakashata ndechekuti ini ndinofanirwa kuve neakaundi account, asi pane nguva shoma dzandinofanira kuzviita kuburikidza ne scp, uye kugadzira account uye nekuibvisa haina kutora chero chinhu.
SFTP kana kuburikidza neMSN (ine Kopete). Zvichienderana nesaizi, hongu.
Ini ndinoshandisa kushambadzira kugovana dhata neshamwari dzangu, rakaomarara dhisiki remakumi mashanu egigabytes rekuchengetedza, ini ndinoisa zvese zvichagovaniswa ipapo uye ndinogovana password nehama dzangu dzepedyo, izvo zvishoma zvishoma nekuti zvinoshanda neJava , asi kana tiine moyo murefu tinokwanisa kunyatsobatsirwa nazvo,
ndicho chakavanzika changu ndapota usaudza munhu hehehe;)
Kufanana newe, ndakaona kuti nzira inoshanda kwandiri ndeye http.
Pandinoda kugovana ndinongoshandisa darkhttpd.
darkhttpd / folda / del / faira
uye ndinovapa IP yangu. Kupera: D
Kana ini ndichida kutumira kana kuunza chimwe chinhu kubva kumusikana wekombuta yangu (iyo inoshandisa Arch Linux) ini ndinongobatanidza kuburikidza nesftp.
Pane yangu laptop ine windows vista ndinogona kuisa iyo samba mafolda; asi kwete zvinopesana, hazvibviri kuwedzera Vista network dhiraivha
Zvakanaka, sekutaura kwealavezz neBichoPro, Opera Unite ingave mhinduro yakanaka dai yaingove yakatsvikinyidzana, asi kutaura chokwadi ndinoiona semhinduro iri nyore.
Pindura kune elefefece
@insengrin: musikana anopfeka arch? Oo
kumafaira madiki ini ndinoshandisa emesene
nguva zhinji ini ndinoshandisa asapload (edza, yakanaka kwazvo) uye kana ini ndisingade chero munhu kuti aione ndinoiisa mune rar, tar.gz, Zip kana chero nekiyi
Ini kashoma kushandisa xampp
musikana anopfeka arch? Oo
Sei Oo? Hazvigone izvozvi?
"Ini handisi kutaura zvekugovana nguva ino kuburikidza neakavhurika P2P network, asi kana iwe uchida kupasa gwaro rinorema kwazvo, mimhanzi kana vhidhiyo kushamwari, zvakananga, PC kuPC, shamwari kushamwari paInternet."
Iwe unogona zvakare kuzviita neBitTorrent protocol, ndiko kuti, P2P: P
Unogona kugovana faira kubva pc kuenda pc nerukova, kukamurwa ndiko bandwidth yako, (ndinoita izvi pazvinenge zvichidiwa) ndosaka ichigovaniswa nevashandisi + kunatsiridza kurodha pasi
Kusiyana neizvozvo, ini ndinotsigira esty xD
sry the 2ble akataura
Inofanira kunge iri Arora muLinux xDD
ne ftp nguva dzose, asi kana ini ndiri kuhwina inokurumidza ine hfs, ini ndinoshandisa izvi nekuti zvakajairika uye zvakajairika pane kushandisa samba
Zvishoma mashoma mabhurawuza paLinux